रुपा सुनारमाथि जा तीय छु वाछुत गर्ने घरबेटी सरस्वती प्रधानलाई शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले छुटाए, अख्तियार दुरुप योगकाे आरो प ? - Nepalese Times
नेप्लिज संवाददाता ९ असार २०७८, बुधबार २०:०१ (1 महिना अघि) ४७४ जनाले पढ़िसके
काठमाडौं । रुपा सुनारलाई दलित भएको भन्दै कोठा दिन अस्वीकार गरेको आरोपमा पक्राउ परेकी घरधनी सरस्वती प्रधानलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको रोहबरमा छाडिएको छ ।
बबरमहलकी प्रधानले दलित भएकै कारण कोठा नदिइको भन्दै रुपाले प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन् । पक्राउ परेकी घरधनीलाई छुटाउन बुधबार शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ आफैँ महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबार पुगेका थिए ।
घरधनी रिहाइको माग गर्दै बबरमहलस्थित सरकारी वकिलको कार्यालयअगाडिको सडकमा प्रदर्शन गरिएको थियो ।
यसैबीच, जातिय विभेद तथा छुवाछुतको कसुरकी अभियुक्त प्रधानलाई रिहा गर्न पुग्ने शिक्षामन्त्री श्रेष्ठमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग उठेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मिन विश्वकर्माले श्रेष्ठमाथि अख्तियार दुरुपयोग गरेको अभियोगमा कारबाहीको माग गरेका हुन् ।
उनले प्रश्न गर्दै लेखेका छन्, –‘पीडितलाई न्याय दिन जाहेरी दिइ मुद्दा बोक्नु पर्ने सरकारका मन्त्री घटनाको अनुसन्धान प्रक्रियानै पूरा गर्न नदिइ स–शरीर आफै प्रहरी कार्यालय पुगेर अभियुक्तलाई छुटाई मन्त्रीकै सरकारी गाडिमा राखेर लैजान्छन भने यो भन्दा लज्जास्पद र पागल्पन के हुन सक्छ ? अब कानुनी राज्य र बिधिको शासन सकिएकै हो ?’
अख्तियार दुरुपयोग भनेको घुस खानु मात्रै नभई पदिय हैसियतको दुरुपयोग पनि भएको भन्दै उनले त्यस्ता मन्त्रीलाई यथाशीघ्र कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।
केहीदिन अघि बबरमहलमा कोठा भाडामा दिने कबुल गरेपछि घरबेटी सरस्वति प्रधानले जातको कारण देखाउँदै भाडामा दिन अस्वीकार गरेकी थिइन् । पीडित बनेकी सञ्चारकर्मी रुपा सुनारले महानगरीय प्रहरी बृत सिंहदरबारमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् ।
जाहेरी पछि पक्राउ परेकी घरबेटी सरस्वति प्रधानलाई सरकारी वकिल समक्ष पेश नै नगरि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको दबावमा आज छुटाइएको थियो । शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ आफै प्रहरी कार्यालयमा पुगेका थिए । शिक्षामन्त्रीकै गाडीमा चढेर चढेर उनी छुटेकी थिइन् । तस्बीर बाह्यखरी डटकमबाट ।
अहिलेसम्म प्राविधिकहरू अम्बाथान नै भने पुग्न नसकेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्तले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार मङ्गलबार आयोजनाका डिभिजनल इन्जिनीयर लगायतको टोली चनौटेबाट झण्डै सातआठ घण्टा पैदल हिँडेर गएको थियो ।
त्यहाँसम्म पुग्ने सडक र पुल बाढीले बगाएकाले अम्बाथानसम्म पुग्न कठिन भएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “प्रारम्भिक अनुमानअनुसार सुरुङ र हेडवर्कबाहेक अरू संरचनामा धेरै क्षति पुगेको छ ।”
निर्माणस्थलमा रहेका बालुवा, गिट्टीलगायत सबै निर्माण सामग्री र भण्डारण गर्ने ठाउँ नै बगाएको आयोजनाले जनाएको छ । त्यहाँ नै बसेर काम गर्नेका लागि बस्ने क्याम्प त्यहाँ रहेका खानेपानी, शौचालयलगायत सबै संरचना बगाएको छ । निर्माण व्यवसायीका उपकरण बगाएको सूचना अधिकारी पन्तले बताउनुभयो ।
मुख्य संरचनामा क्षति नपुगे पनि अम्बाथान अडिट सुरुङमा गिट्टी बालुवा पसेकाले तत्काल त्यो सफा गर्नुपर्ने देखिएको आयोजनाले जनाएको छ । सुरुङको परीक्षणका लागि पहिले प्रवेशमार्ग (सडक) बनाउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
आयोजनाको सुन्दरीजलमा रहेका संरचनामा कुनै क्षति पुगेको छैन भने अम्बाथानमा समस्या रहेको छ । अडिट सुरुङ टालिएकामा त्यो सफा गर्न प्रवेशमार्ग र पुल चाहिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पुल र सडकका विषयमा हामीले सेना र सडक विभागलाई भनिरहेका छौँ ।”
सुरुङको परीक्षण सम्पन्न गरेर पहिले जसरी नै वैकल्पिक माध्यमबाट पानी ल्याउन सकिने सूचना अधिकारी पन्तले बताउनुभयो । त्यसका लागि पनि अम्बाथानको अडिट सुरुङ खोल्नुपर्छ । अडिट सुरुङमा रहेको अवरोध हटाएपछि मुख्य सुरुङ चलाउन सकिन्छ ।
हेडवर्कमा कति क्षति भएको छ र सुधार गर्न कति समय लाग्छ त्यसैका आधारमा काठमाडौँमा कहिलेसम्म पानी आउने भन्ने निर्धारण हुने देखिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “आयोजना सम्पन्न भइनसकेर काम भइरहेकामा अहिले सम्पन्न गर्ने अवधि बढाएको छ ।”
अम्बाथान अडिटको सुरुङ र हेडवर्क डाइभर्सन सुरुङ गरी दुई साता सुरुङ सफा गर्न सकेमा वैकल्पिक प्रणालीबाट काठमाडौँमा पानी ल्याउन सकिने आयोजनाले जनाएको छ । दुई महिनामा सुरुङ परीक्षणका लागि लाग्ने भनिएकामा दुईचार साता त्योभन्दा केही समय बढी लाग्नसक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
वैकल्पिक पथान्तरण प्रणालीबाट चलाउन पनि हेडवर्क डाइभर्सन सुरुङ सफा गर्नुपर्छ । सुरुङ कति टालिएको छ । सफा गर्न लाग्ने समय त्यसका आधारमा निर्भर हुने सूचना अधिकारी पन्तले बताउनुभयो ।
बालुवाले मात्र टालिएमा कामदार मात्र लगेर सफा गर्न सकिने भए पनि ठूला ढुङ्गाले टालेको भएमा सफा गर्न उपकरण नै लैजानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उपकरण लैजान पनि सडक चाहिने भएकाले वडा, पालिका र सडक विभागलाई भनिएको छ ।
भदौसम्ममा पहुँचमार्ग बनेमा आयोजनाले काम अघि बढाउनेछ । जनशक्ति र उपकरण लगेर डाइभर्सन टर्नेल र अम्बाथान अडिट सफा गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
अहिले विपद्का कारण तोकिएको अवधिमा काम नसकिने देखिएकाले निर्माण कम्पनीको अवधि थप गर्नुपर्ने सूचना अधिकारी पन्तले बताउनुभयो । अवधि थपका विषयमा अहिले नै निर्णय भने भइसकेको छैन ।
निर्माणस्थलभन्दा माथिबाट आएको पहिराका कारण आठजना बेपत्ता भएका थिए । तीमध्ये तीनवटा शव भेटिएको छ । पाँचजनाको जानकारी आएको छैन ।